”ကြက်​ဥတစ်​လုံးဘယ်​​လောက်​လဲ”လို့ အမျိုးသမီးတစ်​​ယောက်​က ကြက်​ဥသည်​ အဘိုးအိုကို​မေးတယ်​ – Cele Channel
Posted on January 30, 2018 Author Cele	Comment(0)
”ကြက်​ဥတစ်​လုံးဘယ်​​လောက်​လဲ”လို့ အမျိုးသမီးတစ်​​ယောက်​က ကြက်​ဥသည်​ အဘိုးအိုကို​မေးတယ်​။ အဘိုးအိုက “ကြက်​ဥတစ်​လုံး ၁၀၀ပါ”တဲ့။
အဲဒီအမျိုးသမီးက အဘိုးအိုကို “ကျွန်​မ ၁၀လုံးယူမယ်​​လေ။ ၉၀၀ ပဲထား။ မရရင်​​တော့ မယူ​တော့ဘူး”လို့ဆစ်​​တော့အဘိုးအိုက”​ဈေးဦး​ပေါက်​မို့ ယူသွားပါသမီးရယ်​၊ ဒီနေ့တစ်​လုံးမှ မ​ရောင်းရ​သေးလို့ပါ”လို့ပြန်​​ဖြေတယ်​။
အမျိုးသမီးက ကြက်​ဥ​တွေယူပြီး ​အောင်​ပွဲခံခဲ့ပြီဆိုတဲ့ ဟန်​ပန်​နဲ့ ကြက်​ဥသည်​ အဘိုးအို​ရှေ့က ထွက်​သွားတယ်​။
ပြီး​တော့ လှပတဲ့ကားက​လေး​ပေါ်တက်​ပြီး အ​ဖော်​နဲ့ တန်​ဖိုးကြီးတဲ့ စား​သောက်​ဆိုင်​ သွားစားကြတယ်​။ သူတို့ကြိုက်​တာ​တွေမှာစား​ကြတယ်​။ နည်းနည်းသာ စားပြီး ချန်​ထားခဲ့တာ​တွေကအများကြီးပဲ။
​ငွေရှင်း​တော့ ၃၂၄၀၀ ကျတယ်​။ ဆိုင်​ရှင်​ကို ၃၃၀၀၀ ​ပေးပြီး ပိုတာပြန်​မအမ်းနဲ့​တော့လို့​ ပြောရင်း ခပ်​ကြွားကြွား ထွက်လာခဲ့ကြ တယ်​။ ပိုတဲ့ပိုက်​ဆံပြန်​မအမ်းခိုင်းတာက ဆိုင်​ရှင်​​အတွက် ဘာမှ မထူးခြားတဲ့ တကယ့်​ဖြစ်​ရိုးဖြစ်​စဉ်​ပါပဲ။ ဒါ​ပေမဲ့ ဆင်းရဲတဲ့ ကြက်​ဥ သည်​ အဘိုးအိုအတွက်​က​တော့ အင်​မတန်​နာကျင်​ဖွယ်​ရာ​ပေါ့။
ချို့တဲ့ပြီး​ ငွေလိုအပ်​​နေသူ​တွေဆီက တစ်​ခုခုဝယ်​ယူတဲ့အခါ
ဘာလို့ ကျွန်​​တော်​တို့အာဏာ ပြရတာလဲ။
ကျွန်​​တော်​တို့ဆီက ရက်​​ရောမှုကို​ မလို​အပ်​တဲ့
သူ​တွေကို ဘာလို့ ကျွန်​​တော်​တို့က ​စေတနာပြချင်​
”ကွကျ​ဥတဈ​လုံးဘယျ​​လောကျ​လဲ”လို့ အမြိုးသမီးတဈ​​ယောကျ​က ကွကျ​ဥသညျ​ အဘိုးအိုကို​မေးတယျ​။ အဘိုးအိုက “ကွကျ​ဥတဈ​လုံး ၁၀၀ပါ”တဲ့။
အဲဒီအမြိုးသမီးက အဘိုးအိုကို “ကြှနျ​မ ၁၀လုံးယူမယျ​​လေ။ ၉၀၀ ပဲထား။ မရရငျ​​တော့ မယူ​တော့ဘူး”လို့ဆဈ​​တော့အဘိုးအိုက”​စြေးဦး​ပေါကျ​မို့ ယူသှားပါသမီးရယျ​၊ ဒီနတေ့ဈ​လုံးမှ မ​ရောငျးရ​သေးလို့ပါ”လို့ပွနျ​​ဖွတေယျ​။
အမြိုးသမီးက ကွကျ​ဥ​တှယေူပွီး ​အောငျ​ပှဲခံခဲ့ပွီဆိုတဲ့ ဟနျ​ပနျ​နဲ့ ကွကျ​ဥသညျ​ အဘိုးအို​ရှကေ့ ထှကျ​သှားတယျ​။
ပွီး​တော့ လှပတဲ့ကားက​လေး​ပျေါတကျ​ပွီး အ​ဖျော​နဲ့ တနျ​ဖိုးကွီးတဲ့ စား​သောကျ​ဆိုငျ​ သှားစားကွတယျ​။ သူတို့ကွိုကျ​တာ​တှမှောစား​ကွတယျ​။ နညျးနညျးသာ စားပွီး ခနျြ​ထားခဲ့တာ​တှကေအမြားကွီးပဲ။
​ငှရှေငျး​တော့ ၃၂၄၀၀ ကတြယျ​။ ဆိုငျ​ရှငျ​ကို ၃၃၀၀၀ ​ပေးပွီး ပိုတာပွနျ​မအမျးနဲ့​တော့လို့​ ပွောရငျး ခပျ​ကွှားကွှား ထှကျလာခဲ့ကွ တယျ​။ ပိုတဲ့ပိုကျ​ဆံပွနျ​မအမျးခိုငျးတာက ဆိုငျ​ရှငျ​​အတှကျ ဘာမှ မထူးခွားတဲ့ တကယျ့​ဖွဈ​ရိုးဖွဈ​စဉျ​ပါပဲ။ ဒါ​ပမေဲ့ ဆငျးရဲတဲ့ ကွကျ​ဥ သညျ​ အဘိုးအိုအတှကျ​က​တော့ အငျ​မတနျ​နာကငျြ​ဖှယျ​ရာ​ပေါ့။
ခြို့တဲ့ပွီး​ ငှလေိုအပျ​​နသေူ​တှဆေီက တဈ​ခုခုဝယျ​ယူတဲ့အခါ
ဘာလို့ ကြှနျ​​တျော​တို့အာဏာ ပွရတာလဲ။
ကြှနျ​​တျော​တို့ဆီက ရကျ​​ရောမှုကို​ မလို​အပျ​တဲ့
သူ​တှကေို ဘာလို့ ကြှနျ​​တျော​တို့က ​စတေနာပွခငျြ​
မြန်မာမှာ သရေကွင်းတွေကို ဒီလိုလုပ်တယ်
Posted on December 17, 2017 Author Cele
ပေါင်းထားတဲ့ ရာဘာရည် ထဲ သစ်သားတိုင်တွေထည့် ဖြေးဖြေးပြန်ဆွဲ ဖြေဖြေးလေးပါ နှစ်ပြီးသွားပြီ ခဏထောင်ထား ၁ရက်နေလှန်း ပြန်ချွတ်ပြီ တိုင်က ပြန်ချွတ်ထားတဲ့ ရာဘာကွင်းချောင်း စက်နဲ့ ပါးပါး လှီးဖြတ် ဖြတ်ပြီးသားအကွင်းများ ဖြတ်ပြီးသားတွေ ပြန်ပြုတ် ပြုတ်ပြီး ပြန်ဆယ် အကောင်းနဲ့ အပြတ်ပြန်ရွေး နေပြန်လှန်း Source – Theingi Than Oo fb
သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာ Smart အကျဆုံးအမျိုးသားများ
အမျိုးသားတစ်ယောက် ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ဟာ Smart ကျတယ်ဆိုတာသူ့ရုပ်သူ့ရည် တစ်ခုတည်းကြောင့်မဟုတ်ပဲ သူ့ရဲ့တွေးခေါ်ကြံဆနိုင်မှု၊ သူ့ရဲ့စီစဉ်တွေးခေါ်နိုင်မှုတွေပေါ်မှာလည်းအများကြီး အကျိုးသက်ရောက်နေပါတယ်။ဆိုတော့ဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကတော့။ 1. Albert Einstein 2. Isaac Newton Laws တွေနိယာမတွေကို ကြိုးစားပမ်းစား ဖြေရှုင်း ဖန်တီးခဲ့တဲ့ အတွက်အချက်ပညာရှင်ကြီး Newton ဟာလည်း သမိုင်းမှာSmart အကျဆုံး တစ်ယောက် အနေနဲ့ပါဝင်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့် အခုချိန်မှာ တွက်ချက်မှုပိုင်းတွေဟာ လွယ်ကူပြီး ပုံသေနည်းတွေ Laws တွေဟာ အသုံးဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ 3. Stephen Hawking 4. Galileo Galilei 5. William Shakespeare သူ့အကြောင်းကိုရှင်းပြစရာမလိုလောက်အောင် လူတော်တော်များများသိပြီး သားသူတစ်ယောက်ပါ။ Shakespeare ဟာဆိုရင်လည်း Smart အကျဆုံး အမျိုးသားတစ်ဦးထဲမှာပါဝင်ပါတယ်။ [email protected]
ညှို့ငင်​အားကြီးမားတဲ့ ဘောလီးဝုဒ် မင်းသား ၁၀ ယောက်
နှာခေါင်းကို ပြုပြင်ခဲ့ဖူးပါတယ်လို့ ဖွင့်ပြောလာတဲ့သရုပ်ဆောင်အိစိကွေး